www.nainglinn.blogspot.com: ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ(၃)ပါး ပေါ်ထွန်းချိန် (၂၆၀၁) ခုနှစ်သို့
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ(၃)ပါး ပေါ်ထွန်းချိန် (၂၆၀၁) ခုနှစ်သို့
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ(၃)ပါး ပေါ်ထွန်းချိန် (၂၆၀၁) ခုနှစ်သို့ ရောက်ရှိလာပုံ သာသနာတော်နှစ်(၂၅၅၆)ခု၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၄)ခုနှစ်သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ အထိမ်းအမှတ် (၂၆၀၁)ခုနှစ် (၅)မျိုး ပေါ်ထွန်းတော်မူသောနှစ် ဖြစ်ပါသည်။ ၁။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူသောနှစ် (ဗုဒ္ဓနှစ်) (၂၆၀၁)ခုနှစ်၊ ဗုဒ္ဓနှစ်ကို အရှည်ဖွင့်ဆိုရှင်းပြရလျှင် "ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူသောနှစ်" ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း အကျွမ်းတ၀င်ရှိပြီးသားသည် "သာသနာတော်နှစ်" ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းးနှစ်သည်လည်း မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပြီး (၃)လအကြာမှာ ပထမသင်္ဂါယနာ တင်တော်မူခဲ့စဉ်က အရှင်မဟာကဿပ၊ အရှင်အာနန္ဒာ၊ အရှင်ဥပါလိစသည့် ရဟန္တာ(၅၀၀)နှင့် ဘုရင်မင်းမြတ် အဇာတသတ်မင်းတို့ ညှိနှိုင်းကာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်နှစ်(၅၀၀၀)မက ကျန်ရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်ကာ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၄၈)ခုကို ဖယ်ရှားတော်မူပြီး သာသနာတော်နှစ်(၁)ဟူ၍ စတင်ရေတွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ (၁)(၂)(၃) . . . ဆိုပြီး ရေတွက်လာခဲ့ရာ (၁၃၇၄)ခု ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာ သာသနာ တော်နှစ်(၂၅၅၅)ခုနှစ် ကုန်ဆုံးပြီး ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့မှာ သာသနာတော်နှစ် (၂၅၅၆)ခုနှစ်သို့ စတင်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ယခု သာသနာတော် (၂၅၅၆)ခုနှစ်သည် မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးတော်မူသောနှစ် ဖြစ်သည့်အတွက် မြတ်စွာဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှား တရားဟောတော်မူသောနှစ် (၄၅)၀ါကို ထည့်ပေါင်းပါက (၂၆၀၁)ခုနှစ်သို့ စတင်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် မဟာသက္ကရာဇ်(၁၀၃)ခု ကဆုန်လပြည့် ညနေ နေမ၀င်မီမှာ မာရ်နတ်၏နှောင့်ယှက်မှုကို အောင်နိုင်တော်မူပြီး ညဉ့်ဦးယံမှာ ရှေးဖြစ်ဟောင်းကို အောက်မေ့နိုင်သော ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိ (ပထ၀ိဇ္ဇာ) ဉာဏ်တော်၊ သန်းခေါင်ယံမှာ ငရဲမှစ၍ လူနတ်ဗြဟ္မာလောကရှိ သတ္တ၀ါ ဟူသမျှကို မြင်နိုင်စွမ်းသော ဒိဗ္ဗစက္ခု (ဒုတိယ၀ိဇ္ဇာ)ဉာဏ်တော်၊ မိုးသောက်ယံမှာ ကိလေသာ အငွေ့အသက်မကျန် ခန်းခြောက်စေသော အာသ၀က္ခယ (တတိယ၀ိဇ္ဇာ)ခေါ် အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်တော်တို့ကို ရရှိတော်မူကာ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့ နံနက် အရုဏ်မတက်မီလေးမှာပင် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကို ရရှိတော်မူပြီး ဘုရားဖြစ်တော်မူပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဖြစ်တော်မူပြီးသည်နှင့် ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁)ရက် နံနက်အရုဏ်တက်ချိန် ရောက်လာပါသည်။ ထိုကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်မှ စ၍ သတ္တသတ္တာဟစတင်ပြီး စံတော်မူပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူသောနှစ်(ဗုဒ္ဓနှစ်) (၂၆၀၁)ခုနှစ်သို့ စတင်ရောက်ရှိသလို မြတ်စွာဘုရားရှင် သတ္တသတ္တာဟစံတော်မူသောနှစ်လည်း (၂၆၀၁)ခုနှစ်သို့ တစ်ပြိုင်နက် စတင်ရောက်ရှိလာပါတော့သည်။ ၂။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် သတ္တသတ္တာဟ စံတော်မူသောနှစ် (၂၆၀၁)ခုနှစ် (၁) ပလင်္က သတ္တာဟ ဟကဆုန်လပြည့်ကျော် (၁)ရက်မှ (၇)ရက်အထိ (၂) အနိမိသ သတ္တာဟ ဟကဆုန်လပြည့်ကျော် (၈)ရက်မှ (၁၄)ရက်အထိ (၃) စင်္ကမ သတ္တာဟ ဟကဆုန်လကွယ်မှ နယုန်လဆန်း(၆)ရက်အထိ (၄) ရတနာဃရ သတ္တာဟ ဟနယုန်လဆန်း (၇)ရက်မှ (၁၃)ရက်အထ (၅) အဇပါလ သတ္တာဟ ဟနယုန်လဆန်း (၁၄)ရက်မှ (၅)ရက်အထိ (၆) မုစလိန္ဒ သတ္တာဟ ဟနယုန်လပြည့်ကျော် (၆)ရက်မှ (၁၂)ရက်အထိ (၇) ရာဇာယတန သတ္တာဟဟနယုန်လပြည့်ကျော် (၁၃)ရက်မှ ၀ါဆိုလဆန်း (၅)ရက်အထိ ရာသီဥတုသာယာချိန်၌ လင်းလွန်း ပင်ရင်းမှာပင် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် နောက်ဆုံးသတ္တာဟကို အရဟတ္တဖိုလ် ၀င်စားတော်မူ၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင် သတ္တသတ္တာဟ စံတော်မူခြင်း၏ နောက်ဆုံးရက် (၄၉)ရက်မြောက် ၀ါဆိုလဆန်း (၅)ရက်နေ့မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဖြစ်တော်မူပြီး ပထမဦးဆုံး ဆွမ်းလိုအပ်နေသည့် အချိန်ဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဖြစ်တော်မူမည့် နေ့တစ်ဝက်၊ တစ်ညလုံးနှင့် ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီး (၄၈)ရက်ပတ်လုံး ဆွမ်းဘုဉ်းပေးတော်မူခြင်း၊ မျက်နှာတော်သစ်ခြင်း၊ ရေချိုးတော်မူခြင်း၊ ကိုယ်လက် သုတ်သင်ခြင်း (ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ခြင်း)၊ လျောင်းစက်တော်မူခြင်း . . . စသည့်ကိစ္စများ လုံးဝ အလျင်းမရှိခဲ့ချေ။ ဈာန်ချမ်းသာ ဖိုလ်ချမ်းသာဖြင့်သာ အချိန်ကုန်လွန်စေခဲ့၏။ ထိုနေ့ ဆွမ်းအာဟာရ လိုအပ်နေချိန်မှာ မြန်မာပြည်သား (ဥက္ကလာပသား) တပုဿနှင့် ဘလ’ိက ညီနောင်တို့သည် ဗုဒ္ဓဂယာအနီးသို့ ရောက်ရှိလာသည်နှင့် အချိန်ကိုက်ဖြစ်နေ၏။ ယခင်အတိတ်ဘ၀က ဆွေမျိုးတော်စပ်ခဲ့ဖူးသည့် ရုက္ခစိုးနတ်မင်းက သတင်းကောင်းပေးသောကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံ အချိန်မီရောက်လာကြ၏။ သို့သော် ဆွမ်းချက်ချိန် မမီနိုင်သောကြောင့် ကုန်သည်ညီနောင်တို့ အဆင်သင့် ပါလာကြသော မုန့်ကြက်ကျစ်နှင့် ပျားဆုပ်မုန့်တို့ကို ဆွမ်းဆက်ကပ်ခွင့်ရခဲ့၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် မုန့်ဆွမ်းကို သုံးဆောင်တော်မူအပြီး ကုန်သည် ညီနောင်တို့အား "ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမ'' ဟူသော ဒွေဝါစိက သရဏဂုံကို ပေးတော်မူ၏။ (ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးအား ဓမ္မစကြာတရားဦး မဟောရသေးသည့်အတွက် သံဃာရတနာ မပေါ်ထွန်းသေးပါ။) ထိုညီနောင်တို့၏ တိုင်းပြည် ရာမညတိုင်းမှာ တည်ထားကိုးကွယ်ရန် ဆံတော်ရှစ်ဆူကို ပေးသနားတော်မူ၏။ ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ
ပွင့်တော်မူပြီးသော နောင်တော် ကကုသန်ဘုရား၏ တောင်ဝှေးတော်၊ ကောဏဂုံဘုရား၏ ဓမ္မကရိုဏ် ရေစစ်တော်၊ ကဿပဘုရား၏ ရေသနုပ်တော်တို့ ဌာပနာထားရှိရာ သိင်္ဂုတ္တရကုန်းတော်ပေါ်၌ ဆံတော်ရှစ်ဆူကို ဌာပနာကာ ဘုရားစေတီတည်ပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်စေရန် ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏။ ၃။ ရွှေတိဂုံစေတီတော် တည်ထားကိုးကွယ်သောနှစ် (၂၆၀၁) ခုနှစ် ရာမညတိုင်း ဥက္ကလာပမင်းကြီးနှင့် ပြည်သူအပေါင်းတို့သည် (ယခု) ဗိုလ်တစ်ထောင် ဆိပ်ကမ်းမှာ ဆံတော်ရှစ်ဆူအား မြတ်စွာဘုရားရှင် ကြွလာသည့်အလား ကြိုဆိုပူဇော်ခဲ့ကြ၏။ ဥက္ကလာပမင်းကြီးနှင့် ကုန်သည်ညီနောင်တို့သည် ဘုရားဗျာဒိတ်တော်အရ သိင်္ဂုတ္တရကုန်းတော်ကို ရှာဖွေမတွေ့ကြဘဲ ဖြစ်နေ၏။ နောက်ဆုံး အသက်ရှည်သော နတ်မင်းကြီးငါးပါး (မှော်ဘီနတ်မင်းကြီး အပါအ၀င်)တို့၏ အကူအညီဖြင့် တောင်ကုန်း (၉)ကုန်း(တချို့မှာ (၉၉)ကုန်း)အရံရှိသော အမြင့်ဆုံး သိဂုင်္တ္တရကုန်းတော်ကို တွေ့ရှိသွားကြ၏။ ဘုရားဗျာဒိတ်တော်အရ ဆံတော်ရှစ်ဆူအပါအ၀င် ဘုရားလေးဆူ၏ မွေတော်(၄)ဆူ တို့ကို ဌာပနာကာ ဥာဏ်တော်(၄၄)တောင် (၆၆ပေ)အမြင့်ရှိ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို မဟာသက္ကရာဇ်(၁၀၃)ခု၊ တပေါင်းလပြည့်နေ့မှာ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြ၏။ ဤသို့ဖြင့် ဘုရင်မင်းမြတ်အဆက်ဆက် ပြုပြင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ကိုးကွယ်လာခဲ့ကြရာ ယခု ဖူးမြော်နေရသည့် အမြင့် (၃၂၆)ပေ ရွှေလုံးတော် စေတီတော်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ကြားကာလတွေမှာ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်၊ ကိုးကွယ်မှု လျော့ပါးခြင်းကြောင့် ခြုံနွယ်များ ပိတ်ပိန်းနေခြင်းစသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အမျိုးမျိုး ကျရောက်ခဲ့သော်လည်း ဘုရင်မင်းမြတ်တို့နှင့် ပြည်သူအပေါင်းတို့က ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ပူဇော်ခဲ့ကြလေသည်။ စစ်ပြီးခေတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက်မှာ ပြုပြင်မွမ်းမံလာခဲ့ရာ ယခု (၁၃၇၄)ခု၊ တပေါင်းလပြည့်နေ့၊ ဟ ခရစ်နှစ် (၂၀၁၃) ခု၊ မတ်လ (၂၆)မှာ ] ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးသည် (၂၆၀၁)ခုနှစ်သို့ ရောက်ရှိတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၄။ ဓမ္မစကြာ (၂၆၀၁)ခုနှစ် (၁၃၇၄)ခု ၀ါဆိုလပြည့်နေ့မှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ "ဓမ္မစကြာတရားတော် ဟောတော်မူသောနှစ် (၂၆၀၁)ခုနှစ်" သည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည်းဟူသော ရတနာသုံးပါး စတင်ပေါ်ထွန်းချိန် (၂၆၀၁)ခုနှစ်သို့ စတင်ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူစဉ်က တစ်ရက်တစ်ပါးစီ သောတာပန် ဖြစ်တော်မူကြ၏။ ပထမနေ့ညမှာ အရှင်ကောဏ္ဍညနှင့် ဗြဟ္မာပေါင်း(၁၈)ကုဋေ သောတာပတ္တိ မဂ်ဖိုလ်သို့ ဆိုက်တော်မူကြ၏။ နောက်တစ်နေ့ ၀ါဆိုလပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့မှာ အရှင်ဝပ္ပမထေရ်ကို အဆုံးအမသြ၀ါဒပေးတော် မူလျက် (ဆွမ်းခံမကြဘဲ) ကျောင်း၌သာလျှင် နေတော်မူစေ၏။
ကျန်ရဟန်း(၄)ပါးတို့ ဆွမ်းခံထွက်ကြ၏။ ၀ပ္ပမထေရ်သည် ထိုနေ့နံနက်ခင်းမှာပင် သောတာပန် ဖြစ်တော်မူ၏။ ထိုနည်းအတူ ၀ါဆိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်နေ့မှာ အရှင်ဘဒ္ဒိယမထေရ်၊ ၀ါဆိုလပြည့်ကျော်(၃)ရက်နေ့မှာ အရှင်မဟာနာမ မထေရ်၊ ၀ါဆိုလပြည့်ကျော်(၄)ရက်နေ့မှာ အရှင်အဿဇိမထေရ် တို့သည် အသီးသီး သောတာပန် ဖြစ်တော်မူကြကာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံ ဧဟိဘိက္ခု ရဟန်းအဖြစ်ကို ခံယူတော်မူကြ၏။ ၅။ ရဟန္တာ ပေါ်ထွန်းချိန် (၂၆၀၁)ခုနှစ် "အနတ္တလက္ခဏသုတ္တန်"ဟောတော်မူရာ ဓမ္မေခစေတီတော် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ၀ါဆိုလပြည့်ကျော်(၅)ရက်နေ့မှာ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်း(၅)ပါးအား အာသဝေါတရား ကုန်ခန်းပြီး ရဟန္တာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိကြစေရန် "အနတ္တလက္ခဏသုတ္တန်"ကို ဟောကြားတော်မူ၏။ အနတ္တလက္ခဏသုတ္တန်ဒေသနာ နိဂုံးပြီးဆုံးသောအခါမှာ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်း(၅)ပါးတို့သည် အာသဝေါကုန်ခန်းကာ ရဟန္တာဖြစ်ကြကုန်၏။
၎င်းင်းဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၅)ရက်နေ့မှ အစပြုကာ ရဟန္တာပေါင်း သိန်းသန်းကုဋေချီပြီး ပေါ်ထွန်းတော် မူလာခဲ့ရာ (၁၃၇၄)ခု ၀ါဆိုလပြည့်ကျော်(၅)ရက်နေ့အထိသည် (၂၆၀၀)နှစ်ပြည့်၍ (၂၆၀၁)ခုနှစ်သို့ စတင် ရောက်ရှိလာပေပြီ။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်မကွယ်ပျောက်မချင်း ရဟန္တာများ မဆိတ်သုဉ်းဘဲ ဆက်လက် ပေါ်ထွန်းနေဦးမည် ဖြစ်ပေတော့သတည်း။ ၆။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၂၆၀၀)ပြည့်မြောက် နောက်(၆)နှစ်မြောက် ခရစ်နှစ် (၂၀၁၇)ခု၊ (၁၃၇၉)ခု ၀ါဆိုလပြည့်မှ စ၍ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ အထိသည် တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ ပဋ္ဌာန်းတရားတော် အပါအ၀င် အဘိဓမ္မာတရားတော်ကို ရက်ပေါင်း(၉၀)လုံး တစ်နာရီ၊ တစ်မိနစ်၊ တစ်စက္ကန့်မခြားဘဲ ဟောကြားတော်မူသောနှစ် "ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၂၆၀၀) ပြည့်နှစ်" ကို စတင်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ၎င်းင်းပူဇော်ပွဲကို ကျင်းပရန် ကြိုးစားနိုင်ဖို့ နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ ကြိုတင်ကာ နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ထပ်မံပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဗုဒ္ဓ၀င် ဖြစ်တော်စဉ် အားလုံးသည် (၂၆၀၀)ပြည့်မှ (၂၆၀၁)ခုနှစ်သို့ တန်းစီပြီး ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ပွားများနိုင်ပါစေခြင်း အကျိုးငှာ မဟာကုသိုလ်တော် အမျှပေးဝေအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။ (မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တသာရာဘိဝံသ၏ မဟာဗုဒ္ဓ၀င် ဒုတိယတွဲ ကျမ်းစာအုပ်ကို မှီငြမ်းပါသည်။) credit : SSခင်မောင်အေး(သချာင်္)